Mbola ho ela ny delestazy : amin’ny volana marsa ny vahaolana, raha hisy… | NewsMada
Mbola ho ela ny delestazy : amin’ny volana marsa ny vahaolana, raha hisy…
Par Taratra sur 11/02/2017
Delestazy. Mbola izay ihany hatrany… Olona fototra amin’izao fotoana izao, indrindra ho an’ny Renivohitra. Inona ny vahaolana? Mbola amin’ny volana marsa, raha hisy…
Tsy misy tsy mikaikaika amin’ny delestazy. Efa nisy ny nidina an-dalambe. Aiza na iza koa ny manaraka? Tsy hita izay tena ataon’ny mpitondra fanjakana amin’ny famahana olana. Hatramin’ny rahoviana no hahazaka sy hiaretan’ny vahoaka izao?
“Araka ny filankevitry ny minisitra niarahana tamin’ny filoham-pirenena, raha araka ny tokony ho izy: amin’ny volana marsa, efa maro amin’ny faritra eto Madagasikara no hahazo tombontsoa sahady amin’ny ezaka ataon’ny governemanta amin’ny fampidirana angovo azo havaozina.”
Valin-tenin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, tamin’ny mpanao gazety tany Analalava, afakomaly, io, momba ny delestazy efa ho lava. Nambarany ny fialana tsikelikely amin’ny fampiasana foibe mpamokatra herinaratra amin’ny alalan’ny solika, izay ampiasana gasoil vidian-dafo.
Efa mieritreritra ny fanjakana…
“Efa mieritreritra ny fanjakana hoe mifindra tsikelikely amin’ny fampiasana solika mavesatra, izay moramora kokoa”, hoy izy. Hajanona amin’izay ny fampiasana foibe mpamokatra herinaratra amin’ny alalan’ny solika, fa miditra tsikelikely amin’ny solika mavesatra.
“Tsy ampy izany, fa ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana indrindra: inona no hatao mba hisitraka ny asa ataon’ny Jirama ny vahoaka?” hoy ihany izy. Efa idirana ny angovo azo havaozina: ny avy amin’ny herin’ny masoandro, ohatra, ny tohodrano mamokatra herinaratra… Maro ny angovo azo havaozina, ary efa an-dalam-panatanterahana azy ny fitondram-panjakana.
Vahaolana vonjimaika izao dia izao aloha no takin’ny vahoaka
Firy tao-maty izay ny vahoaka niaritra ihany ny fahatapatapahan-jiro, fa tsy hita izay tena ataon’ny mpitondra. Miandry tolo-tanana na famatsiam-bola avy any ivelany? Na poretin’ny mpamatsy vola amin’izao fotoana izao, vao mikoropaka… Tsy voajery mialoha izay mety hitranga, indrindra amin’ny fiainam-bahoaka.
Vahaolana izao dia izao fa tsy eritreritra na fanontaniana amin’izay hatao no tadiavin’ny vahoaka. Farafaharatsiny, fanomezana antoka sy fanazavana amin’ny antsipiriany izay vahaolana: aiza avy, rahoviana, inona…? Tsy fampandriana adrisa. Efa telo taona izay nandeferana sy niaretan’ny vahoaka ny fahatapahan-jiro hoe ho voavaha ao anatin’ny telo volana. Aiza izay eo?
Efa tsy zaka sy tsy azo leferina intsony ny raharaha, matoa midina an-dalambe maneho ny fahatezerany amin’ny andro alina ny mponina amin’ny faritra sasany. Mbola hampiandrasina volana marsa indray? Nefa tsy fantatra hoe iza avy ny faritra hisitraka izany. Sao hanahirana ny 14 % amin’ny vahoaka malagasy hoe hany manjifa herinaratra amin’ny farany? Efa mby amin’izany izao…